Burcad Hubaysan Oo Xalay Weerartay Laacib Ka Tirsan Napoli Kaddib Cayaartii Liverpool | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Burcad Hubaysan Oo Xalay Weerartay Laacib Ka Tirsan Napoli Kaddib Cayaartii Liverpool
(04-10-2018) Budhcad ku hubaysan qoryaha daran-doorriga u dhaca ayaa xalay dhexda u galay laacibka lagu magacaabo Arkadiusz Milik inyar kaddib markii ay dhamaatay ciyaartii ay Napoli 1-0 kaga adkaatay Liverpool.
Budhcaddan oo watay laba mooto ama dhug-dhuglay ayaa waxay xawaare dheer ku dhaafeen gaadhiga uu watay Milik waqti ay saacaddu ahayd 2-dii habeennimo oo uu laacibkani kusii socday gurigiisa.
Dadkan tuugada hubaysan ah oo tiradooda lagu sheegay laba qof, ayaa ka helay Milik goobta lagu magacaabo Varcaturo oo ah jid ay baaskiiladaha iyo mootooyinku ka gooyaan badhtamaha magaalada Napoli, waxaanay baadheen gaadhiga iyagoo qori ku haya Milik.
Ma jiro war rasmi ah oo ciidamada boolisku kasoo saareen falkan naxdinta leh, hase yeeshee warbaahinta Il Mattino ayaa shaacisay in Milik aanay waxyeelo kasoo gaadhin falka lagula kacay, hase yeeshee, waxa jira baadhitaano ay qolyaha ammaanku ku hayaan, iyadoo wararku tibaaxayaan in wejiyada labada budhcadda ah la aqoonsaday.
Magaalada Naples ee ay ka dhisan tahay kooxda Napoli ayaa caan ku ah budhcadda Maafiyada ah, kuwaas oo fal dambiyeedyo iyo dil toos ahba ka geysta halkaas.